Uyilo lwe-OnePlus 7 lutyhiliwe, ngelishwa kwikhamera yayo | I-Androidsis
Ayiloxesha lokuqala ukubona i Uyilo lwe-OnePlus 7 olunokwenzeka. Kude kube ngoku, besilindele imodeli ngenkqubo yekhamera kathathu, into entsha kwizixhobo zenkampani, kodwa ngoku sinokuqinisekisa ukuba iflegi elandelayo esekwe eShenzhen iza kujongeka kanjani. Kwaye yile, uthotho lwezigubungelo luye lwavuza olwenza ukuba kucace gca ukuba yintoni Uyilo lwe-OnePlus 7.
Ewe, kuvuza nje, ngenxa yoko kunokuba yinyani, kodwa zininzi iinkcukacha ezenza ukuba sicinge ukuba sijonge uyilo lwe-OnePlus 7. Ukuqala, le modeli inkulu ngokufana ne-OPPO F11 Pro, yinto exhaphakileyo kuhlobo lophawu, kuba bobabini abavelisi bangamalungu endibano enye. Ukuba songeza koku umgangatho wemifanekiso, ohambelana nezikhuselo ezisemthethweni, bayenza icace gca ukuba le iya kuba yimbonakalo yemodeli elindelekileyo.
1 Isiphelo sesikrini sonke, ngaphandle komkhondo wenotshi ... okanye i-3.5 mm jack
2 Iinkcukacha ezithe kratya kwizinto ezinokubakho ze-OnePlus 7
Isiphelo sesikrini sonke, ngaphandle komkhondo wenotshi ... okanye i-3.5 mm jack
Njengoko ubona kwimifanekiso eyahlukeneyo ehamba nenqaku, sifumana iinkcukacha ezininzi ezinomdla ngokubhekisele kuyilo lwe-OnePlus 7. Ukuqala, phezulu sifumana isivamvo esinokuthi senze imisebenzi infrara, ukuze sisebenzise ifowuni ngokungathi sisilawuli kude.
Kule nto kufuneka kongezwe ukuvulwa okunomdla okufumaneka kwindawo enye. Kulapho i Ikhamera yangaphambili ye-OnePlus 7. Ewe, ifowuni yayiza kubheja kwisisombululo esinokurhoxiswa ukukhusela inotshi ekophuleni i-aesthetics yesikrini. Uyilo oluyingozi kodwa, ubuncinci, lwenza umahluko xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo. Kumacala esiphelo sendlela sibona izinto ezimbalwa ezintsha: ifowuni kunye nokucofa iqhosha, iqhosha lolawulo lwevolumu kunye nelinye iqhosha elizinikeleyo esinokumisela lona ukuba livule isicelo esifuna kakhulu.
Ukuhamba uye emazantsi, kulapho ifowuni yefowuni yohlobo C lwe-C iya kubekwa khona, kunye nesithethi se-OnePlus 7 kunye nekhadi le-nanoSIM. Ummangaliso? Ukuba akukho mveliso ye-3.5mm yomsindo nokuba. Ukuphoxeka okukhulu, ngokwenene. Nangona yayingeyonto esingakhange siyilindele. Kwaye asinakulibala ngasemva, sicoceke ngokupheleleyo, kwaye eyona nto intsha yayiyinto yokuba inenkqubo yekhamera kathathu kunye nesibane se-LED. Kubonakala ngathi umenzi uza kubheja kakhulu kwicandelo lokufota.
Kuthekani ngaphambili? Apha sibona enye indaleko enomdla. Kwabaqalayo, imodeli ayinalo naluphi na uhlobo lwenotshi kwiscreen, ngenxa yoko ayophuli i-aesthetics kwaye inika isixhobo ukuziva ngakumbi kwiscreen sayo yonke ifowuni. Uninzi lwale mfanelo luya kukungabikho ngokupheleleyo kwezakhelo emacaleni, sibona kuphela isakhelo esisezantsi esincinci. Ukongeza, kunokuba njani ngenye indlela, uyilo lwe-OnePlus 7 luya kubandakanya ukufundwa kweminwe okudityaniswe kwiscreen sesixhobo, kubalulekile kwiifowuni ezifuna ukuba yinxalenye yoluhlu oluphezulu kwicandelo.
Iinkcukacha ezithe kratya kwizinto ezinokubakho ze-OnePlus 7
Ngokubhekisele kwizixhobo esiya kuthi sinyuke esi siginali, siza kuqala ngokuthetha ngescreen se-OnePlus 7, esenziwe yiphaneli ye-AMOLED ene-6.4-intshi idiagonal kunye nesisombululo esipheleleyo seHD + Kule nto, kufuneka songeze i-jewel kwisithsaba seQualcomm, iprosesa ye-Snapdragon 855 kunye ne-Adreno 640 GPU kunye ne-8 GB ye-RAM, ukongeza kulungelelwaniso lwenkumbulo eyahlukeneyo eya kuthi isuke kwi-128 iye kwi-512 GB.
Ikhamera engemva iyakwenziwa ngenkqubo yelensi ephindwe kathathu ene-48-megapixel sensor yokuqala, i-20-megapixel-angle-angle kunye ne-5-megapixel telephoto lens, ngaphandle kokulibala ikhamera ebuyisa umva ngaphambili enokuba nesisombululo se-16-megapixel. Ukugqiba ngezixhobo ezinokubakho kwi-OnePlus 7, yithi iyakufika ngePie ye-9 4.000 phantsi komaleko wesiko lomenzi we-OxygenOS, ukongeza ekubeni ne-mammoth XNUMX mAh ibhetri enexabiso elikhawulezayo elinokuba noxanduva lokuxhasa zonke ubunzima behardware yale killer yexesha elizayo. Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngazo Uyilo lwe-OnePlus 7?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Zonke iinkcukacha zoyilo lwe-OnePlus 7 zivelisiwe. Ikhamera yakho iyakumangalisa!
UXiaomi sele ethengisile ngaphezulu kwesigidi se-4 iRedmi Qaphela i7